Kushongedza Crafts Vagadziri | China Kushongedza Crafts Vatengi & Fekitori
3 * 6 padiki Tiles
6 * 6 padiki Tiles
Ruoko Rwakashongedzwa neCeramic Yakashongedza Art Tile
Yakagadzirwa nemaoko Ceramic Wall Tiles 6 × 6
Magadzirirwo: 1. Yakanakisa zvedongo tirairi 2. Masikisi mazhinji, akasiyana magadzirirwo 3. Yakanaka mhando, yemakwikwi mutengo 4. MOQ: 50pcs yeimwe dhizaini. penzura yakapfava uye yakapendwa ruoko ichibva yadzvanywa pakudziya kwakanyanya kuti ive nechokwadi chemhando yepamusoro uye yakanyatsogadzirwa uye kupenya muvara kupfuura mashini. Zvigadzirwa zvedu zvinounza husingaenzanisike runako uye chimiro kumatunhu enzvimbo uye hofisi nzvimbo fo ...
Yedu mataera matafura ekushongedza ese akaitwa nemaoko kushandisa zvedongo nzira uye dhizaini basa rakaunzwa pamberi kubva kuChina humambo hwetsika zenith, glazed hari mataira akaumbwa mumhando dzakagadziriswa mabasa ehunyanzvi. Vanounza kukwirira kusingaenzanisike uye masitayera kunzvimbo dzekugara uye nzvimbo yehofisi yekugadzira hupenyu hwakawedzera kunaka. Nezvigadzirwa zveFashoni, iwe unowana mazano uye kurudziro yekubatsira kushongedza uye kunakidza zvine hungiso. Zvimiro 1. Ruoko rwakapendwa, glazed uye huni dzakapisa zvedongo zvekushongedza ...
Tsananguro Ndokumbirawo ubate nesu kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve edu mataira. Matiles edu ese akagadzirwa nemaoko. Tenga mataira aya akagadzirirwa kurembera nyore! Ichi chingave chakanakisa chipo kune iye anodikanwa wemhizha, muridzi webhawa, shamwari, nhengo yemhuri, kana kuzvichengetera wega! Iyi mural yaizoita kuwedzera kukuru kubhawa, kuresitorendi ...
Isu tine akasiyana magadzirirwo esarudzo yako. Isuwo tinogona kupenda zvigadzirwa zvako pane iyo tile. Uye OEM sevhisi inowanikwa. Iyo magineti kumashure kwayo inogona kusungirirwa kune chero ferrous pamusoro uye magnetic board. Senge simbi yakakweshwa maburi firiji madhoo, masherufu esimbi, hoods dzemahara, ovhoni, mahofisi makabati, masuo ekuchengetedza, magineti emabhodhi, magineti machena, magineti evana ekudhirowa, nezvimwe zvinogona kushandiswa kutora mapikicha, manotsi anonamira, mareti, nezvimwewo. be adsorbed on hasha g ...
Ma coasters edu akagadzirwa nemaoko ndiwo akakwana ekudyira ako ekudyira. Yainzwa-yakachengetedzwa kuchengetedza tafura uye inodhonzwa chete neruoko uye yakanyoroveswa uye kupenya muvara kupfuura mashini. Ma coasters edu achave akakosha uye akasarudzika chipo chekuchenesa imba, zuva rekuzvarwa, uye mamwe mhemberero… kana kungo ratidza kuti une hanya nevadikani vako! Unogona kuvashandisa sevatengesi vetii, macasters emuchato, tafura yekushongedza… Iwo anozogadzirirwa iwe chete! Main kugadzirwa muitiro All wor ...
AIHWA. 402 HEPING WEST WEST ROAD, SHIJIAZHUANG, HEBEI Dunhu, CHINA